प्रदेश राजधानीमा लागुऔषध, बलात्कार र आत्महत्या प्रहरीको चुनौतिः एसपी चतुर्वेदी (अडियोसहित) – Online Jagaran
प्रदेश राजधानीमा लागुऔषध, बलात्कार र आत्महत्या प्रहरीको चुनौतिः एसपी चतुर्वेदी (अडियोसहित)
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १३:२५ July 21, 2018 जागरण
सुर्खेत, ४ साउन (जागरण) । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक हजार ४६ मु्द्धा फर्छौयोट गरेको जनाएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यालयमा दर्ता भएका एक हजार ३ सय ७६ मुद्धा मध्ये १ हजार ४६ मुद्धा फर्छौयोट गरिएको जानकारी दिईएको हो । ३ सय ३० मुद्धा अँझै फछ्र्याैट गर्न बाँकी छ ।
प्रहरीमा सबै भन्दाबढी घरेलु हिंसाका मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ४ सय ५९ घरेलु हिंसाका मुद्धाहरु प्रहरीमा दर्ता भएका हुन् ।
सुर्खेतमा पछिल्लो समय आत्म हत्याका घटनाहरु पनि बढेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा ९२ जनाले आत्म हत्या गरेका छन् ।
यस्तै एक वर्षमा १ सय ६३ वटा सार्वजनिक अपराधका मुद्धा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सार्वजनिक अपराध ७५ वटा मात्र भएका थिए । प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारका २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यसैबिच, हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरिररहेको काम, हाँसिल भएका उपलब्धी र देखिएका चुनौतिका बारेमा एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
उहाँलाई जागरणकर्मी मुना हमालले सबैभन्दा पहिला गत आर्थिक वर्षमा महत्वपुर्ण काम के के गर्नुभयो ? भनेर सोध्नुभएको छ । सुन्नुस् यो कुराकानी (अडियो) ।
सामाजिक सुधारका लागि बारेकोटमा कानुनी परामर्श दिईने (अडियोसहित)
पाँच सय बढी घरधुरी लाभान्वित हुने गरी आलीमा विद्युत सेवा विस्तार
युवा स्वरोजगार प्रमुख प्राथमिकताः छायाँनाथ रारा प्रमुख शाही (अडियोसहित)
१४ कार्तिक २०७५, बुधबार ०७:२३ October 31, 2018 जागरण
मन्त्री बर्खास्तीः जनता के भन्छन् त ? (अडियोे सहित)
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार ००:३८ November 15, 2018 जागरण
सुर्खेतमा पुनः १० जनामा कोरोना संक्रमण
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:२९ April 2, 2021 जागरण